Enwere m mmasị na data dị na akụkọ a site na Buddy Media na infographic si Fusework Studios. Ihe data a na-egosi ebe oru ndi nwere ohere itinye aka na ndi ahia mgbe ha di, gwa ndi na-eso ha ka ha mee ihe, ma mee ka ozi di mfe. N'ezie, m na-agba ndị ahịa anyị ume ịnwale na ịlele. Ikekwe ndị asọmpi gị anaghị atụgharị uche na ngwụsị izu - ọ nwere ike ịbụ oge zuru oke maka ị lebara anya.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịhụ data niile dị na infographic ahụ, budata akụkọ zuru oke nke Buddy Media, Atụmatụ maka Tweet Ting: A Statistic Review. Na, jide n'aka na ị ga-enyocha akwụkwọ ozi anyị ihe kpatara eji ewepu gi na Twitter!